mars 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Fahatsiarovana ny nidiran’ny Tompo tao Jerosalema
Ry havana, azo lazaina fa an-tsitrapo tokoa no nandehanan’i Jesoa tao Jerosalema satria hatramin’izay dia nikasa ny hisambotra azy foana ny olona fa tsy nahazo azy. saingy eto kosa dia Izy mihitsy no nanolo-tena hiditra ao Jerosalema ary tsy natahotra hosamborina ary tao anatin’izay no nilazany fa Mpanjaka Izy. Ny antony nandravany ny tao an-tempoly dia ny mba hampitodika ny olona any Aminy satria Izy no mpanelanelana antsika amin’Andriamanitra Ray. Ary ny antony nilazany hoe : « Ravao ity Tempoly ity fa ho atsangako indray afaka hateloana » dia hanehoany amintsika fa samy manampy antsika ho tonga any an-danitra na ny Fiangonana na Izy, saingy Izy irery ihany kosa no afaka mamonjy antsika fa tsy ny Fiangonana.
Lesona roa ary no hozaraina amintsika androany :
Ny fihetsiky ny mpianatra manoloana ny fisamborana an’i Jesoa
Diso fanantenana ny mpianatra satria natoky loatra (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo
Navelan’Andriamanitra notafihan’i Nabokôdônôzôro ny tanàna, nodorany ny Tempoly, (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady 11 Martsa 2018
«Tsy mamela hipetra-poana ny fitiavana an’Andriamanitra »
Ry havana, misasaka sahady ity ny Karemy. Alahady telo eo ho eo sisa dia hiditra amin’ny Alahadin’ny Sampankazo isika. Nisy tanjona napetratsika tany am-boalohan’izao Karemy izao dia ny ho lavorary kokoa hatrany hanantona an’Andriamanitra ary izay ihany koa no tena dikan’ny Karemy : miala amin’ny ratsy ary mankany amin’ny tsaratsara kokoa, manantona kokoa an’Andriamanitra.
Tamin’ny Alahady voalohany isika dia nentin’i Jesoa tany an’efitra, avy eo tany an-tendrombohitra ary amin’ity Alahady fahatelo ity kosa dia entiny ao an-tempoly.
Miverina amintsika i Jesoa androany manome dikany : ny hasin’ny Fiangonana, ny hasin’ny tenantsika, ny Tempoly.
Tena tian’Andriamanitra isika olombelona. Nisahiranan’Andriamanitra mihitsy isika tamin’ny nahary (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady 04 Martsa 2018